Famerenana ireo kinova ofisialin'ny Android | Androidsis
Famerenana ireo kinova ofisialin'ny Android
Google | | Fampiharana Android, Fitaovana Android
Efa ho valo taona lasa izay dia nivoaka ny kinova voalohany an'ny rafitra fiasa mpitarika eo amin'ny tsenan'ny finday. Azo antoka, ny ankamaroanareo dia tsy nahazo fotoana hanandramana ny kinova beta voalohany na koa ny Android voalohany. Ho an'izay, dia namboarinay ny lisitr'ity kinova ofisialin'ny Android ity izay resahinay, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ny toetrany sy ny endrika ivelany.
0.3 Android 1.1 Mofo Banana
1 Android 1.6
1.1 Android 2.0 ary avy eo
Navoaka tamin'ny Novambra 5 avy amin'ny 2007. Tena tsy dia misy resaka firy momba ny beta voalohany amin'ity rafitra fiasa ity, satria toy ny betas rehetra dia nanandramana ny asany marina sy feno fotsiny izy io. Navoaka tamin'ny 12 Novambra 2007 ny SDK.
Navoaka tamin'ny 23 septambra 2008. Ny fitaovana voalohany nahatratra ny tsena tamin'ity rafitra fiasa ity dia ny HTC Dream. Na dia toa somary manan-tantara ihany aza izany raha oharina amin'ireo kinova ankehitriny, dia tonga fitaovana tsara izany.
HTC Dream: finday voalohany nahatratra ny tsena tamin'ny kinova 1.0
Anisan'izany ny Android Market, fampifanarahana amin'ny Gmail ary mpilalao ho an'ny horonantsary YouTube ankoatry ny hafa. Ny rindranasa izay, na dia toa zavatra ilaina amin'ny finday rehetra aza ankehitriny, dia naneho dingana vaovao eo amin'ny sehatry ny telefaona izany fotoana izany. Ity misy latabatra misy ireo rindranasa napetraka ao Android 1.0:
Fampiharana izay tonga miaraka amin'ny kinova 1.0
Android 1.1 Mofo Banana
Satria ny hany terminal izay nanana ny rafitra fiasa android dia ny HTC Dream, nilaza fa ny terminal ihany no niasa ny fanavaozana. Navoaka tamin'ny 9 Febroary 2009 izy nefa tsy niova firy. Hadisoana voavaha ary nanova ny API.
Roa volana mahery no vao nivoaka ny kinova manaraka. Tamin'ny 30 aprily 2009, dia nanisy fampiasa vaovao izy ireo ary fanitsiana indray izay nankasitrahan'ilay mpampiasa. Mamelatra latabatra anao aho izay taratry ny vaovao izay nahitana:
Fiovana amin'ny kinova 1.5
Takila an-trano Version 1.5
Kely ny hevitra momba ity fanavaozana ity. Nivoaka tamin'ny 15 septambra 2009 niaraka tamin'ny antsipiriany vitsivitsy izay nanatsara ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny terminal. Ity misy pikantsary iray momba ny endrik'ity pejy ity:
Takila an-trano Version 1.6
Android 2.0 ary avy eo
Nipoitra izy ireo nanomboka ny 26 Oktobra 2009 hatramin'ny 21 septambra 2011. Angamba ny malaza indrindra dia ny Android 2.3.x Gingerbread satria manangona kinova 7 samihafa izy. Ny ankamaroan'ny fanovana dia mifantoka amin'ny kinova 2.3.0 / 2.3.1, satria amin'ny kinova hafa (hatramin'ny 2.3.7) dia misy ihany fanamboarana bibikely y fanatsarana ny fampisehoana. Ny fanovana nomarihina dia:
Fampisehoana sy fanovana amin'ny kinova 2.3.0
Ny Android 3.0 Honeycomb SDK dia nivoaka tamin'ny 22 Febroary 2011. Ny tena mampiavaka azy dia ity fanavaozana ity natokana ho an'ny takelaka. Ny takelaka voalohany nanana ny kinova 3.0 dia Motorola Xoom. Ity misy latabatra voafaritra:
Endri-javatra izay ananan'ny kinova 3.0
Takelaka voalohany amin'ny Android 3.0
Ny SDK -ny dia nivoaka tamin'ny 19 Oktobra 2011. Io no Android voalohany nanambaran'ireo mpitantana azy hoe "ny kinova voalohany izay mifanaraka amin'ny teôlika amin'ny fitaovana rehetra" taorian'ny kinova 2.3. Ny mampiavaka azy dia:
Fanavaozana izay tafiditra ao amin'ny kinova 4.0.0
Tamin'ny 27 Jona 2012, navoaka ny kinova voalohany amin'ity rafitra fiasa ity, mifantoka amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa. Nahitana tombony toy ny fiandrasana am-pahefana, buffer telo ary hafainganam-pandehan'ny 60 fps. Ny Nexus 7 no fitaovana voalohany nandefa ity kinova ity.
Tsy misy zava-baovao miavaka raha oharina amin'ilay teo aloha. Ny hany zavatra holazaina dia ilay anecographe tao ambadiky ny famelabelarany. Hambara amin'ny hetsika any New York ny 29 Oktobra 2012 io, fa nampiato ny rivodoza Sandy. Raha tokony hanambara daty vaovao hanaovana ny hetsika izy ireo dia nanambara izany tamin'ny fanambarana an-gazety.
Nalefa tamin'ny 24 Jolay 2013 izy io ary niaraka tamin'ny laharana faharoa tamin'ny Nexus 7 ny 30 Jolay 2013. Ireto ny fiovana lehibe:
Endri-javatra manan-danja indrindra amin'ny kinova 4.3
Ny safidy nampiana dia mahaliana kokoa. Fanontana amin'ny alàlan'ny WiFi, hitsin-dàlana ho an'ny a mahomby kokoa na fandaminana ny fanatsarana bateria izy ireo no manan-danja indrindra.
Fitaovana Android 4.4.0
Io no fanavaozana Android farany hatreto. Nanomboka navoaka tamin'ny Desambra 2014. Fotoana fohy taorian'izay dia nanomboka nozaraina izany 5.0.1 Lollipop ary ny kinova 5.0.2.
Tamin'ny 21 aprily dia nanomboka namela ny Android 5.1.1 i Google ary, nandritra ny fihaonamben'ny mpamorona Google I / O 2015 dia nambara izany Android M , ny mpandimby an'i Lollipop.
Ity misy latabatra misy endri-javatra manan-danja indrindra amin'ny Android 5.0:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Famerenana ireo kinova ofisialin'ny Android
Azonao atao izao ny mamaky Androidsis ao amin'ny News Republic, ny fampiharana vaovao tsara indrindra ho an'ny Android
Fanamboarana fitaovana mozika mampiasa mpanonta 3D